တောင်ရေးမြောက်ရေး: March 2009
ကဲ.. ရင်ခုန်ရတာမှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမ မောင်လေးညီမလေး ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ဘဘအန်တီ အန်ကယ်ကြီးဒေါ် ဖိုးဖိုးဖွားဖွား( အမ်မလေး..မောပါ့တော်) တို့အတွက် ထိုင်းသရဲကားအသစ်စက်စက်လေး Coming Soon ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း။ ။ This movie will scare you from the second you step inside the movie theatre..
It will get you wondering if Something or Someone might be waiting for you to let your guard down. The horror movie that you just saw is about to happen to you in real life! Coming Soon....
ကဲ စောင်ကိုခေါင်းမြီးခြုံ နေကာမျက်မှန်တပ် စပီကာကို mute လုပ်ပြီး ဇိမ်ရှိစွာ အိမ်မှာ ကြည့်ကြပါစို့။ ။ :P
Posted by ဘာတွေတုန်း at 4:39 AM0comments
Posted by ဘာတွေတုန်း at 5:02 AM5comments
Posted by ဘာတွေတုန်း at 7:19 AM7comments
Posted by ဘာတွေတုန်း at 3:51 AM4comments